Volana DESAMBRA 2016
Hetsika ato ho ato :
Alahady 01 Janoary 2017 @10h30 ato @ Chapelle: Fotoam-pivavahana ho fifampiarahabana ny Taombaovao.
Asabotsy 14 Janoary @18h00 ato @ Chapelle: Fiofanana sy fampianarana hatao ho an'ny AMF sy ny SZM.
Alahady 15 Janoary @10h30 ato @ Chapelle: Andro hiarahabana ireo zokiolona eto amin'ny Tafo. Hisy fiaraha-misakafo sy fanolorana solombodiakoho aorian'ny fotoampivavahana.
Ny Fotoana tamin'ity Volana ity.
Alahady 25 Desambra @10h30 ato @ Chapelle ihany :Fankalazana ny Krismasy.
Feno hipoka ny Chapelle St Marc tamin'ity andro anio ity. Nitondra sy nitarika izay anjaranay avy ireo sampana velona ao amin'ny Tafo.
Nisy fizaràna vatomamy sy chocolat tery ampiravàna.
Ny fotoana manaraka dia ny Alahady 01 Janoary 2017.
Alahady 18 Desambra @10h30 ato @ Chapelle ihany :Fametrahana ny Pst Rakotoarimanana Joseph ho Mpandrindra ny Tafo eto Orléans.
Ny Pasitera RANDRIAMBOLOLONA JAcky no nitarika ny fotoana
Ny Pasitera Synodaly Rev RAVALITERA Jean no nitoriteny ary ny Mpit Lydia RAVALITERA kosa no naolotra ny Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo.
Toarian'ny fotoana dia nisy collation na "verre de l'amitié" no niarahana tamin'ny rehetra ary niafara kosa tamin'ny fiaraha-misakafon;ny sasany tao @ Komity niaraka tamin'ny Mpitandrina Joseph,
Ny fotoana hihaonana manaraka dia ny andron'ny Krisimasy @ 10h30.
-Asabotsy 17 Desambra @ 16h na 4o.h. ao Chapelle St Marc : Noelin'ny Sampana Miray
Takariva hafanain'ireo Sekoly Alahady sy ny Sampana velona eto amin'ny Tafo.
Faranana amin'ny fiaraha-misakafo sy hirahira ny fotoana. Nisy olona 60 mahery teo no niaraka nikorana tao amin'ny Chapelle tamin'io fotoana io.
-Asabotsy 10 Desambra 2016 @17h na 5o.h. ao Chapelle St Marc: (jereo ny Flyer)
Noelim-pitolomana Antsampanahy ataon'ny AMFOrléans naAmboara
Alahady 04 Desambra @10h30 ato @ Chapelle ihany
Alahady voalohan'ny volana sady koa misy ny FFT no Alahady fandovana adidy.
Tamin'ny dinika tamin'ny PS Ravalitera Jean dia hatao ny 18 Desambra izao ny fametrahana ny Mpitandrina RAKOTOARIMANANA Joseph ho Mpandrindra ny Tafo Orléans.
Ny hitarika ny fotoana amin'io dia ny Mpandrindra ny Faritany RANDRIAMBOLOLONA Jacky ary ny PS kosa no hitoriteny.
Volana NOVAMBRA 2016
Hetsika ato ho ato na @ Volana manaraka:
Faranana amin'ny fiaraha-misakafo sy hirahira ny fotoana.
Alahady 25 Desambra @10h30 ato @ Chapelle ihany :Fankalazana ny Noely
Ny Isaky ny Alahady
Alahady 27 Novambra 2016-Alahady voalohany @ Advento
Alahadin'ny Sampana Zavamaneno:
Nandray anjara [email protected] fotoana dia:
Nitoriteny:Past Joseph Rakotoarimanana.
Nofaranana tamin'ny fivarotana laoka sy tsindrin-tsakafo izany.
Niisa teo @ 82 ny olona tonga tao ka 66 ny lehibe ary 16 ny ankizy.
Nandritry ny Ankatoka kosa no nanolorana ireo katekomena valo mianadahy ato amin'ny Tafo.
Natolotry ny filoha ny tatitra avy any @ Synoda Nasionaly tany Lille natao ny 11-12-13 Novambra farany teo.
Alahady 20 Novambra 2016:
Alahady fahatelo nitondran'ny Mpitandrina ny Fampianarana momban'ny Reformasiona ka nanazavana ny fanajanonana ny loko litorjika maitso ka soloina ny mena [email protected] faran'ny Taona.
Tatitra momban'ny Fivorian'ny Komity natao ny Asabotsy 19 Novambra.
Alahady 6 Novambra 2016
Nosokafana ny 05 Novambra ny Culte de la Cité izay nentina nakalazana ihany koa ny faha 500 taonan'ny Reformasiona.
Fantatra tamin'ity kosa fa lany voiafidy ho filohan'ny SVK Nasionaly i Rtoa Ramananjo Sylvie filohan'ny SVK eto antoerana.
Isan'ny Mpiangona 76 ka lehibe 59-ankizy 17.
Volana OKTOBRA 2016
Hetsika sy tranga atsy ho atsy:
Asabotsy 15 Oktobra 2016 @ 6 o.h.: Fivorian'ny Komity (hiarahana amin'i Pst Joseph Rakotoarimanana voalohany)
Alahady 16 Oktobra 2016: Hitoriana sy ampianarana momba ny ao @ Baiboly.
Alahady 23 Oktobra 2016: Ankatoky ny fandraisana
Alahady 30 Oktobra2016: Fampianarana momban'ny Litorjia.
Alahady 06 Nov 2016 Fivorian'ny Birao Orléans ho fanomanana ny fivorian'ny Komity.
Zoma 11 Nov - Asabotsy 12Nov-Alahady 13 Nov 2016: Synoda lehibe any Lille.
Alahady 16 Oktobra 2016
Alahady 02 Oktobra 2016:
Alahady nandraisan'ny Mptitandrina Mpandrindra ny Tafo Orléans Pst RAKOTOARIMANANA Joseph ny fandrindrana teto. Alahady Fandraisana ihany koa moa izy io sady andro nanaovana ny dingana farany tami'ny fananteram-bokatra 2016.
Rehefa vita ny fotoampivavahana dia nizotra nandeha niaraka nisakafo tatsy @ Salle Blossière ny mpiangona niaraka tamin'i Pasitera. Fotoana nanaovana ny fanadiovana ny salle ihany koa io fotoana io.
Niisa 62 ny mpiangona tao ka lehibe 52 ary 10 ny ankizy.
Ny fotoana manaraka dia ny 16 Oktobra 2016
Asabotsy 01 Oktobra 2016:
Andro natokana ho Sakafom-pirahalahiana, natao tetsy @ Tranompokonolona les Blossières na salle Yves Montand. Niisa teo amin'ny 76 teo ny olona tonga tamin'io.
Volana SEPTAMBRA 2016
Hetsika amin'ity volana ity
Alahady 04 Septambra 2016: Alahady fanombohana ny taompianarana 2016-2017. Hatomboka @ 10ora maraina, hisy FFT ary Collation aorian'ny fotoana.
Asabotsy 17 Septambra 2016: Zaikabe FAfAts etsy Athis Mons: Lycée St Charles 2 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 @ 10h - 17h00.
Alahady 18 Septambra 2016; @ 10h30 ao @ Chapelle St Marc toy ny mahazatra
Ny Mpit Marc Rakotoarimanga no hitarika sy hanao ny fampianarana amin'izany fotoana izany
Asabotsy 24 Septambra @ 15 ora sy Alahady 25 Septambra: Lasim-piangonana hatao etsy La Ruche -St Laurent-Meung sur Loire.
-Fiantranoana: Sakafo Asabotsy sy fatoriana ary ny Alahady tontolo (sakafo maraina-antoandro) 25€
Sakafo Asabotsy alina fotsiny 5€ - Saosisy +vary amin'anana.
Sakafo Alahady maraina :3€ Sakafo Alahady antoandro:10€ (Barbecue)
Sabotsy faha-24 septambra 2016
Fampianarana tontosain'n'ny Mpit RAMAROKOTO Andrianasolo Antoine
2 : 00 – 2 :30 Fandraisana ny Mpilasy – Fandiminana ho amin’ny fivoriana
2 :30 – 3 :00 Fanompoam-pivavahana fanombohana ny Lasy
3 :00– 4 : 45 Fandinihana ny Lohahevitra voalohany + Fifanakalozana
4 :45 – 5 :15 Fialana-hetaheta / Maka rivotra
5 :15 – 6 :45 Fotoana Fihaonana isan-tSampana velona (misy mpitandrina)
6 :45 – 7 :00 Fiomanana amin’ny sakafo
7:00 – 8:30 Sakafo hariva + Fanadiovana ny trano
8:30 – 10:00 Fandinihana ny Lohahevitra faharoa + Fifanakalozana
10:15 Vavaka mamarana ny andro sabotsy
Alahady faha-25 septambra 2016
7:00 – 8:30 Mifoha/miomana + Sakafo maraina
9:00 – 10:45 Fanompoam-pivavahana
11:00 – 12:00 Fotoana Fihaonana isan-tSampana velona
12:00-2:00 Sakafo antoandro
2:00 - 3:00 Fandaminana/ Fanadiovana ny toerana – Famaranana ny Lasy
Asabotsy 01 Oktobra 2016:Fananteram-bokatra FPMA Orléans ao amin'ny Salle Yves Montand les ,Blossières hanomboka amin'ny4ora hariva.
Jereo ny Flyer.
Hetsika efa nitranga
Alahady 18 Septambra 2016:
Teto @ Chapelle St Marc Orléans tamin'ny 10h30
Alahady fahatelo notarihan'ny Mpit Rakotoarimanga Marc
Niisa 53 ny mpiangona ka ny 11 tamin'ireo ny ankizy.
Vaovaom-piangonana: Marihana fa mitambatra be ny hetsika fa tsy maintsy nakisaka ny lasintsika mba hanatsofohana ny lasin'ny FAfAts izay tokony natao ny 07 Jona 2016 teo (nisy inondation)
-Fisaorana ireo vahoakan'Andriamanitra 22 avy eto amin'ny Tafo Orléans tonga nantrika sy nanafana ny fotoana tany Athis Mons
-Fandraisana ny fisoratana anarana momban'ny Lasimpiangonana hatao any Meung sur Loire. Fizarana ny anjaran'asa, izany dia tohizana any Meung sur Loire.
-Fisoratana ho an'ny Fetim-piangonana any Blossière nny 01 Oktobra
Asabotsy 17 Septambra 2016 etsy Athis Mons; @10h00 Fanompoampivavahana Fanombohana, aorian'izay dia misy ny Fampianarana maro isaky ny thèmes.
Ny fandraisan'anjara isan'olona moa dia ny Tafo Orléans no mandray azy ka misoratra any amin'ny Filoha ireo tonga any momba izany.
Ny sakafo dia samy mitondra ny azy ny isan'olona na isantokantrano na isantafo ka eny an-toerana vao hatambatra.
Ny tsaky sy ny fisotro rehetra kosa dia hatambatra homena ireo mpikarakara ho an'ny famarotana azy.
Ny Stand isantafo dia mba mitondra Elobe fa tsy Tonnelle akory. Ny Tafo manafana ny lalao isankarazany no jerena momba izay atao.
Ho faranana amin'ny Antsampanahy ataon'ny AMF ny fotoana @ 19h any.
Volana JOLAY sy AOGOSITRA 2016
Alahady 28 Aogositra 2016 :Alahady famaranana ny fotoampialan-tsasatra.
Ho tarihan'i Pst Ninà na Pasteure Raharinoro RASOANIRINA ny fotoana amin'io.
Hisy fandraisana ny Fanasan'ny Tompo.
Hisy famangiana azy no izy namoy ny Reniny: RAVONIARITSIMBA Lala Fleurette tamin'ny volana lasa teo.
Alahady 04 Septambra 2016: Alahady fanombohana ny taompianarana 2016-2017.
Asabotsy 17 Septambra 2016: Zaikabe FAfAts etsy Athis Mons.
Asabotsy 24 Septambra sy Alahady 25 Septambra: Lasim-piangonana hatao etsy nLa Ruche Meung/Loire.
Asabotsy 01 Oktobra 2016:Fananteram-bokatra FPMA Orléans.
Fotoana volana JOLAY 2016
Alahady 3 Jolay 2016-Fanompoam-pivavahana hisy Fandraisana ny Fansan'ny Tompo.
Fotoana ho tarihan'ny Pst RAKOTOARIMANGA Marc.
Alahady 17 Jolay 2016: Alahady famaranana ny taompianarana sy fanombohan'ny fotoam-pialantsasatra.
Ho tarihan'ny Pst RAKOTOARIMANGA Marc.
Alahady 28 Aogositra 2016 : Alahady famaranana ny fotoampialan-tsasatra.
Ho tarihan'ny Pasteure Ninà na Raharinoro RASOANIRINA ny fotoana amin'io.
Asabotsy 01 Oktobra 2016: Fanoloram-bokatra FPMA Orléans.
Filazana manjo nitranga teto @ Tafo:
Ny havantsika Liva RAMANANTSEHENO-FOCARD sy James FOCARD dia namoy ny zanany:
Dr RAMANOELINA Herintseheno Jacky izay nivahiny 50 taona teto antany.
Ny fotoampivavahana ho fisaorana an' Andriamanitra dia hatao ny Alarobia 29 Jona @14h30 ao @ Chapelle St Marc 130ter rue du Petit Pont 45000 Orléans.
Avy eo ny vatana mangatsiakan' Itompokolahy dia aterina etsy @ Grand Cimetière d'Orléans.
« Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesoa ho anareo » I Tesaloniana 5, 18
Fotoana sy hetsika eto amin'ny Tafo
Asabotsy 25 Jona 2016
Hetsika ataon'ny sampana AMF Amboara Orléans ao @ salle Madeleine eto Orléans: Antsampanahy sy ranty isankarazany ary hafanain'ny Mpanakanto eto amin'ny Tafo Orléans.
Alahady 26 Jona 2016:
Alahadin'ny Sampana AMF Orléans;
Ao aorian'ny fanompoam-pivavahana dia hisy fiaraha misakafo Agape hatao any @ Salle Madeleine eo @ 13h eo ka samy mitondra ny azy ka izay no hifampizarana.
Volana MEY 2016
Hetsika volana manaraka (Jona)
Alahadin'ny Sampana AMF Orléans
Hanomboka @ 10h30 ao @ Chapelle St Marc 130 ter Rue du Petit Pont. Avy eo @ 13h dia hisy fiaraha-misakafo hanasan'ny Fiangonana ny tsirairay ho fifankahalalana etsy @ Salle Madeleine. Ny sakafo dia samy mitondra ny azy ka iny no hifampizaràna amin'ny rehetra.
Hetsika Volana MEY eto amin'ny Tafo
Alahady 01 Mey 2016: Fandraisan-tànana ny Loholona James Focard sy ny Filohan'ny AMFO Liva Focard ary ny Mpanamarimbola Rtoa Eugénie Rabenja .
Asabotsy 07 Mey 2016: Fetim-piangonana Orléans hatao ao @ Salle Yves Montand ao les Blossières.
Asabotsy 21 Mey 2016: Rindra sy Antsa hataon'ny STK Orléans miaraka amin'ny "GOD SWING" @ 17h ato @ Chapelle St Marc 130ter rue du Petit Pont Orléans..
Alarobia 25 Mey 2016: Andro hifampiantsoana hanadiovana ny Fiangonana.
Alahady 29 Mey 2016: Alahady hihaonan'ny Tafo FAHAZAVANA sy ny Tafo Orléans. Hisy fiaraha-misakafo ny atoandron'io.
Fotoana teto amin'ny Tafo
Alahady 29 Mey 2016: Alahady nihaonan'ny Tafo Fahazavana Yvelines sy Tafo Orléans. Hisy Fandraisana amin'io andro io ary ho faranana amin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana. izany rehetra izany dia natomboka [email protected] 10h30 tao @ Chapelle St Marc ihany.
Asabotsy 21 Mey sy Alahady 22 Mey: Hetsika STKO niaraka [email protected] God Swing sy STK FAfAts
Niisa amanjatony tokoa ireo nanotrona ny STK Orléans tamin'ny hetsika nataony tamin'ny Asabotsy lasa teo. Koa fisaorana manokana no atolony ny STK FAfAts noho fifarimbonana nataony. Tsy azo adino kosa anefa ireo nanohana nividy ny takila na tsy ho afaka nanatrika aza.
Izany moa dia narahany ny Alahadin'ny Sampana natao tao amin'ny Chapelle ny ampitso ihany.
Alahady 15 Mey 2016: PENTEKOSTA 2016
Alahady notarihan'i Pst Marie Angèle RAHARIJAONA
Asabotsy 07 Mey 2016: Fetim-piangonana FPMA Orléans
Fotoana nafanain'ny Sampana Velona rehetra eto @ Tafo: SA-STK-SZM-SVK-AMF nanomboka [email protected] 13h teo ny fisakafoanana ary nifarana [email protected] Valo ora hariva.
Isaorana ireo tonga nanatrika izany indrindra ireo avy lavitra avy any amin'ny Tafo FAfAts sy ny FM Bourges-Vierzon ary koa moa ireo avy eto antoerana.
Alahady 1er Mey 2016:
Alahady voalohany amin'ny volana ka misy Fandraisana ny FT ary koa ny fandoavana ny adidin'ny MFT.
Tamin'ity Alahady ity ihany koa no naovana ny hafatra ho fametraha-teboka ho an'ny tsirairay nizay misalahy manantanteraka ny Fetimpiangonana hatao ny Asabotsy manaraka izao.
Volana APRILY 2016
Hetsika eto amin'ny Tafo
Asabotsy 21 Mey 2016: Rindra sy Antsa hataon'ny STK Orléans miaraka amin'ny "GOD SWING" @ 17h ato @ Chapelle St Marc 130 rue du Petit Pont Orléans..
Alahady 03 Aprily 2016:
Alahadin'ny Sekoly Alahady:
Alahady misy Fandraisana Fanasan'ny Tompo sady koa andro fandoavana adidy.
Fotoampivavahana notarihan'ny ao @ Sampana SA ihany.
Ny Mpitandrina Pascaline Ratavao no nitory ny tenin' Andriamanitra tamin'izany.
Nisy fivarotana barquettes sakafo feno taorian'ny Fotoana.
Asabotsy 16 Aprily 2016
Andro fivorian'ny Komity ara-potoana : nodinihana [email protected] izany indrindra ny vaomiera rehetra hatao amin'ny fetimpiangonana ny 07 Mey 2016 ary koa ny hetsika ataon'ny STK.
Alahady 17 Aprily 2016
Fotoana notarihan'ny Loholona Ramamonjy Bertrand ary i Henintsoa Rasolonjatovo no nanolotra ny sakafom-panahy.
Alahady 24 Aprily 2016
Fotoampivavahana notarihan'ny Mpitandrina Raharinoro. Ary izy ihany koa no nanao ny hafatra ho fanomanan-tena @ FFT manaraka (Akatoka).
Nisy famangiana ny Fianakaviana Ramananjo noho fandaovan'i Tpklahy Eloi Rafelimanana rainy.
Alahady manaraka dia ny Alahady 01 Mey @ 10h30
andro FFT ary ho tarihan'ny Pst Ramarokoto.
Volana MARSA 2016
Alahady 06 Marsa 2016: Fanokanana Diakona sy Loholona
Fotoampivavahana notarihan'ny PS Ravalitera Jean sy nanokanana ny Diakona Nériah ary nametrahana sy nandraisantanana ireo Diakona sy Loholona eto amin'ny Tafo.
Naharitra Telo ora mahery ny fotoana tamin'izany.
Teo ampiravana no nizaran'ireo Diakona ny vatomamy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra.
Alahady 20 Marsa 2016: Alahadin'ny SVK Orléans
Ity Alahady ity izany no fankalazana ny 08 Marsa, andro iraisampirenenan'ny Vehivavy, ho an'ny SVKO,ny fotoampivavahana tamin'izany dia notarihan' i Rtoa Ruth Rasamimanana avy ao @ Birao SVKO.
Tamin'ny firavàna dia nisy barquettes vitsivitsy namidin'izy ireo hamenoany ny kitapombolany.
Alakamisy 24 Marsa 2016: Alakamisy Masina
Fotoampivavahana notarihan'i Pst Raharinoro RASOANIRINA (na Pst Ninà), nisy Fanasàna (FFT) toy ny nataon'ny Tompo tamin'ny Mpianany izany fotoana izany.
Ny fiangonana manaraka dia ny Alakamisy masina izay hisy ny hafatra lehibe dia ny Fanasana Voalohany nataon'ny Tompo ho fahatsiarovana azy.
Alahady 27 Mars 2016: PASKA 2016
Fotoana notarihan'i Pst Mpandrindra ny Faritany Jacky Randriambololona.
Nisy fizaràna vatomamy taorian'io fotoana io toa ny mahazatra.
Ny fotoana manaraka ndia ny Alahady 03 Aprily: Alahadin'ny Sampa SA na Sekoly Alahady.
Volana FEBROARY 2016
Hetsiky ny Sampana:
SA: Isaky ny Alahady faha3 sy faha 4: Fianarana aorian'ny Toriteny ho an'ny madinika ary aorian'ny Culte ho an'ny zonkiny.
SVK: 20 Marsa Alahadin'ny SVK.
AMF: Asabotsy 05 Marsa @ 16h: Famerenankira.
Alakamisy masina24 Mars: Antsam-panahy.
Alahady 28 Febroary 2016
Fotoam-pivavahana notarihan'i Pst Raharinoro Rasoanirina ka ny teny notoriana [email protected] izany dia ny tao @ Perikopa: Eks 3:1-15 sy I Korintiana 10:1-12 Izay azo fintinina amin'ny hoe: Ataovy mafy horina ny mahaKristiana anao ka hitovy ny hita aty ivelany sy ny any anaty...
Niisa ho 48 ny olona tonga ka 38 lehibe ary 10 ny ankizy.
Alahady 06 Marsa 2016 @ 10h ato amin'ny Chapelle St Marc: Fotoan-dehibe hanokanana sy handraisan-tànana ireo Diakona sy Loholona voafidy [email protected] 4 Oktobra lasa teo.
Ny Pasitera Synodaly Jean Ravalitera no hitarika sy hitondra ny fampianarana amin'izany ary koa hanao ny Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo (FFT).
Sabotsy 12 Marsa 2016: @ 9ora maraina Komitim-paritany FAfAts
@ 2ora atoandro Synodam-paritany .
Alakamisy 24 Marsa 2016: @19h00 Antsam-panahy ataon'ny AMBOARA na AMF Orléans ao @ Chapelle St Marc
Zoma 25 Marsa 2016: @19h00 Firaisampinona etsy @ EPUdF
Alahady 27 Marsa 2016: @ 07h30 etsy amin'ny Kianja Campo Santo
@10h00 Fankalazana ny Paska eto @ Chapelle St Marc.
Alahady 07 Febroary 2016
Ny Mpitandrina Théodore Randriamanatena no nitarika sy nanao ny fampianarana.
Alahady voalohan'ny volana: Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo sady fanefan'ireo Mpandray ny adidy ao @ Tafo.
Ny fotoana manaraka: Alahady 21 Febroary
Volana JANOARY 2016
péricope du jour puis changer la date de "l'adresse".
Miarahaba ny mpianakavin'ny Finoana FPMA rehetra sy ny eto amin'ny Tafo Orléans nahatratra ny taombaovao 2016
Alahady 30 Janoary 2016
Nitarika sy nitoriteny : Pst Marie Angèle Raharijaona
Alahady 24 Janoary 2016
Mpitarika : Larry Rakotovelo Diakona eto amin'ny Tafo.
Nitoriteny: Misa Rakotondravah Mpitory mpiofana ao Parsis
Alahady 17 Janoary 2016
Alahady natokana hiarahabana nahatratra ny taona ireo Zokiolona eto amin'ny Tafo, notarihan'i Pst Marie Angèle Raharijaona.
Niisa 60 mahery ny mpiangona ka 56 ny lehibe ary ny sisa no ankizy.
Taorian'ny fotam-pivavahana no naovana ny sakafom-pirahalahiana niaraka tamin'izy ireo.
Niisa 18 teo ny Zokiolona niaraka tamin'izany.
Ny fotoana manaraka :
Asabotsy 23 Janoary any Athis Mosns @ 10h; Fiofanana ho an'ireo Diakona sy Loholona eto amin'ny Faritany FAfAts.
Alahady 24 Janoary ao @ Chapelle St Marc @ 10h30
Vorilaniny tokoa ny vahoakan'Andriamanitra teto @ FPMA Orléans namonjy ny Alahady voalohan'ny Taona.
Natomboka [email protected] 10 ora ny fotoana notarihan'i Pst Jacky Randriambololona Mpitandrina Mpandrindra ny Faritany Afovoany Atsinanana (FAfAts).
Niisa sivifolo latsaka ny mpiangona tamin'izany ka 68 ny lehibe ary 20 ny ankizy.
Ny Fiangonana manaraka:
Alahady 17 Janoary 2016 @10h30 ao Chapelle St Marc: Alahady hiarahabana ireo zokiolona mihoatra ny 65 taona eto amin'ny Tafo Orléans.
Ny fotoana dia ho tarihan'i Pst Marie Angèle Raharijaona
Aorian'ny fotoana dia hisy Lasopy mafana sy "Composée" hiarahana amin'ireo zoky raiamandreny eto amin'ny Tafo.
Asabotsy 16 Janoary ao @ Chapelle St Marc manomboka @ 14h: Fiofanana ho an'ny Diakona sy Loholona mandritry ny adiny dimy.
Alahady 17 Janoary aorian'ny fotoam-pivavahana no atao ny fiarahabana ireo zokiolona eto amin'ny Tafo Orléans. Hisy Lasopy mafàna haroso amin'izany ampiarahana amin'ny composée mba hanatevina azy.
Alahady 17 Janoary @ 10h30 ao @ ERF Orléans: fametrahana ny Mpitandrina vaovao ao @ EPUdF Orléans izay hanasàna ihany koa antsika eto @ FPMA na Komity na MFT.
Asabotsy 23 Janoary any Athis Mons (Lycée St Charles) : Andro natokan'ny FAfAts ho fifam-piarahabana: Jereo ny Flyer manga etsy ambony.
Alahady 24 Janoary:
Alahady maraina @ 10h 30: Culte [email protected] Capelle St Marc
Alahady tolakandro :Fiaraha mivavaka ekominiaka eto Orléans manomboka @ 14h30 .
Volana Desambra 2015
Miarahaba ny rehetra nahatratra ny Krismasy 2015 sy ny Taom-baovao 2016.
Fiangonana manaraka :Alahady 03 Janoary @ 10h maraina: Alahadin'ny TAOM-BAOVAO 2016
Ny Mpitandrina Mpandrindra ny Faritany FAfAts Pst Randriambololona Jacky no hitory ny tenin'Andriamanitra
Alahady 27 Desambra 2015 [email protected] 10h30:
Ny Mpitandrina RANDRIAMANANTENA Théodore no nanolotra ny teny fampianarana io andro io rehefa avy nampiofana ny Diakona sy ny Loholona ny Asabotsy 28 Desambra tolakandro.
Natao io Asabotsy io ihany koa ny fifidianana ny Biraon'ny Fiangonana.
Nisy famangiana ny Fianakaviana Rabearimonjy kosa tao aorian'ny fotoampivavahana.
Fiangonana manaraka: jereo ny Kaladary etsy ankavia.
ZOMA 25 Desambra [email protected] 10h 30: KRISMASY 2015
Ny Rev RAVALITERA Jean no nitarika sy nitondra ny fampianarana teto @ Tafo Orléans.
Niisa 140 teo ny Mpiangona ary nisy 28 ny ankizy tamin'izany:
Fiangonana manaraka: Zoma 25 Desambra @ 10h30: Krismasy 2015
Ny Pasitera Synodaly no hitarika sy hanolotra ny tenin' Andriamanita amin'io fotoana io; Hisy fandraisana ny fanasan'ny Tompo ho an'ireo Mandray (MFT) ary fizarana vatomamy ho an'ny rehetra aorian'ny fotoana.
Asabotsy 19 Desambra: Noelin'ny Sampana velona eto amin'ny Tafo.
Samy nandray anjara avokoa ireo Sampana eto amin'ny Tafo: SA; STK;AMF ary ny SVK sy n'y SZM.
Natao tao amin'ny Chapelle ihany ny fiaraha misakafo sy ny rindrankira fanao mandritra ny sakafo. Nalahatra ny latabatra 12 ary teo no hita fa azo hihinanana ihany izany n'y toerana sady tsy nangatsiaka ihany koa ny andro.
Alahady 13 Desambra : Fiarahana [email protected] EPudF
Fiarahana mivavaka natao tao @ EPUdF [email protected] 15h ary nandraisan'ny Sekoly Alahady sy ny Antokom-pihira anjara. Nisy fanalana hetaheta miaraka no natao tao aorian'ny fotoana.
Asabotsy 12 Desambra 2015: Antsampanahy Amboara
Antsampanahy nataon'ny Sampana Antokom-pihira ho famaranana n'y fankalazana ny faha 30 taonan'ny Amboara Orléans.
Nisy hira 12 no natao tamin'izany ary fankalazana nyNoely no tena venty tamin'izany.
Volana Oktobra 2015
Fotoana notarihan'ny Mpitandrina Jacky Randriambololona Mpitandrina Mpandrindra ny Faritant FAfAts.
Alahady nentina nisaorana an'Andriamanitra amin'ny famaranana ny fankalazana ny faha 35 taonan'ny Tafo sy ny tsingerintaonan'ny Sampana Velona rehetra eto amin'ny Tafo.
Niisa Zato mahery teo ny nanatrika ny fanompoam-pivavahana tao @ Chapelle St Marc.
Mahery kelin'izay no tonga tamin'ny sakafo Agape natao tao @ tranompokon'olona tetsy Blossière (Salle Yves Montand). Nafàna tokoa ny fotoana tamin'izany ka natsahatra rehefa tonga ny [email protected] ora hariva.
Fa dia fisaorana no atolotra ireo izay nanotrona ny Tafo tamin'izany hetsika rehetra izany.
Ny Asabotsy 17 Oktobra 2015
Niisa 78 no nanatrika ny Tolakandron'ny Sampana tao amin'io Salle io ihany.
Antso: Mbola azo atao ny misoratra anarana @ ny Zaikabe 31 Okt sy 01 Nov any La Roche sur Yon ny , hisy fandraisan'anjaran'ny Fiangonana amin'ny saran-dasy
Azonao antsoina 06 58 74 23 63. alohan'ny 25 Oktobra.
Alahady 25 Oktobra 2015: amin'ny 10h30 ao amin'ny Chapelle St Marc
Fotoana tarihan'i Pst Jacky A. Mpitandrina FAfAts.
Alahady 1er Novambra: Mikatona ny Fiangonana fa asaina isika hamonjy ny Zkb any La Roche sur Yon.
Alahady 4 Oktobra 2015: Alahadin'ny Fianakaviana
Alahady Fandraisana ary indrindra Alahady Fifidianana ireo Diakona hiasa @ taona 2016-2017.
Ny Mpitandrina Randriamanantena Théodore filohan'ny FMM no nitondra ny teny fampaherezana sy fampianarana tamin'izany ary ny Mpitandrina Landy Andrianavelasoa no nitarika ny fotoana.
Alahadin'ny Fianakaviana moa ity Alahady ity ka izany no vontoatin'ny Teny notoriana tao.
Vita soamantsara ihany koa ny fifidianana Diakona teto amin'ny Tafo Orléans, izay natrehan'ny Filohan'ny Faritany Rtoa Andianony Olitiana.
Folo no isan' ny Diakona nolaniana araky ny tapaky ny Komity.
Niisa 71 ny vahoakan'Andriamanitra nanatrika ny fotoana . Tratra araka izany ny quorum raha ny lisitry ny MFTn'ny Tafo no jerena.
Alahady 18 Oktobra 2015 @ 10h maraina ao @ Chapelle St Marc
Hitoriteny: Rev Doct RAVALITERA Jean, Filoha Synodaly FPMA
Alahady famaranana ny faha-35 taonan'ny Tafo sy ireo Sampana Velona ao aminy. Aorian'ny fotoana dia hiroso amin'ny sakafo Agape etsy @ salle Yves Montand ireo izay efa nisoratra anarana.
Efa feno ny toerana.
Vaovao eto antoerana: Ny fikarakarana ny faha 35 taonan'ny Tafo @ Asabotsy 17 Oktobra sy ny Alahady 18 Oktobra no nanterina tamin'izany.
Tao izany ny fisoratana anarana amin'ny fandraisan'anjara @ fikarakarana ny sakafo ary tao ihany koa fandraisana ny anaran'ireo hisakafo ny Alahady satria moa voafetra ny toerana.
Ny fisoratana anarana dia mbola ekena hatramin'ny 10 Oktobra 2015.
Volana Jolay - Septambra 2015
Alahady 27 Septambra 2015
Alahady farany amin'ny Volana, izany hoe Alahady hanaovana ny Akatoka sady Alahady ho fanomanana ny fifidianana Diakona hatao ny 04 Oktobra ho avy izao:
Nolazaina tamin'izany akatoka izany fa NATOLOTRA (article 28.7) ny Mpandray MFT rehetra izay nanaiky, ho fidiana eo amin'ny Tafo koa tsy misy lisitra hafa izany amin'ny fifdianana araky ny kajy satria efa ny MFT iray Tafo manontolo no misoratra ho fidiana.
Niisa 51 ny olona tonga nanatrika ny fanom-poampivavahana tamin'io.
Jereo na anontanio ny anaranao raha ao amin'ilay lisitry ny MFT.
Antsoina ireo Mpandray ny Fanasan'ny Tompo (MFT) izay tsy mbola namaly na namerina ny Bulletin d'Adhésion mba hanao izany ka haka ny karatra maha-mpandray azy mba hafahany mifidy (sy ho fidiana)ny 04 Oktobra.
-Ny Fiangonana manaraka dia ny Alahady 04 Oktobra: Hisy fandraisana FT amin'io ary koa ny fifidianana Diakona.
-Ny Sampana SA dia hanomboka ny fidirany ny Alahady 04 Oktobra ho avy izao.
-Ny Vaomiera35 dia nanambara fa handefa tableau fisoratana anarana amin'ny tsakitsaky izay azo haroso ny Asabotsy 17 Septambra tolak'andro.
Filazana manjo: avy @ FM Vierzon-Bourges
-Ny fianakaviana Rakotoarison mivady ary i Lalasoa Noir vadiny dia nampandre ny fahalasan'i Jean NOIR (Joany) [email protected] Alahady 20 Sept lasa teo. Ny fandevenana dia natao ny Asabotsy 26 Septembre tany Vierzon ary nisaoran'ny Fianakaviana ny Mpitandrina sy ireo solontena avy aty amin'ny Tafo Orléans.
Alahady 6 Septambra 2015
Alahady fidirana: hanombohan'ny taon-tsekoly 2015-2016.
Niisa 60 mahery teo no tonga nanatrika ny fotoampivavahana niaraka [email protected] Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo.
Nofaranana [email protected] fanalàna hetaheta am-pirahalahiana ny tapak'andro.
Ny Biraom-piangonana no mbola nanohy [email protected] Fivoriana nandinihana ny raharahampiangonana indrindra fa momban'ny Fifidianana Diakona izay atao ny 04 Oktobra ho avy izao.
Vaovao sy Raharaham-piangonana
-Fotoana manaraka dia amin'ny Lasimpiangonana any Meung/Loire.
-19-20 Septambra: Lasim-piangonana 2015 etsy La Ruche Meung sur Loire.
Asabotsy 19 Septambra -15h-23h Fampianarana sy loambary andasy+ Takariva amoropatana Alahady 20 Septambra 2015: Fampianarana + Fotoampivavahana+ Sakafo.
Ny sarandasy dia 15€/pers raha matory sy misakafo.
5€/pers isaky ny sakafo raha tsy matory.
Ny fisoratana anarana dia alefa any @
Vola : [email protected]
na Ramamonjy : [email protected]
na Orélien : [email protected] 02 38 76 42 78 na 06 58 74 23 63.
alohan'ny 16 septambra 2015
Alahady 27 Septambra @ 10h30 : Fotampivavahana ao @ Chapelle St Marc 130 ter r du Petit Pont Orléans
-Alahady 04 Oktobra 2015 @10h30:Fotoampivavahan sy Fandraisana FT ary Fifidianana Diakona Tafo Orléans.
Antsoina ireo terem-panahy hirotsaka ho fidiana Diakona ho amin'ny taona 2016-2017. Azo atao koa ny manolotra olona amin'izany raha manaiky izy.
Hilazàna ireo tsy manana karatry ny Mpandray mba hisoratra ka haka izany any amin'ny Filoha
Orélien: [email protected]orleans.fr 02 38 76 42 78 na 06 58 74 23 63.
Ny Tafo Gd Champs dia hanao ny fankalazana ny faha 10 taonany ny Asabotsy 12 Septambra sy ny Asabotsy 17 Oktobra.
Famangiana ny Fianakaviana Florence Clerc (Mpitambolan'ny Tafo) namoy ny zokilahiny Davidson
Alahady 30 Aogositra 2015
Alahady nanaovana fampianarana: Règlement momban'ny Fifidianana ny Diakona sy Loholona.
Nanaovana ny ankatoka ihany koa. Niisa 31 ny olona tonga tamin'io fotoana io.
Alahady 23 Aogositra 2015
Alahady niangonana voalohany taorian'ny volana Jolay. Nisy Fandraisana FT tamin'izany fotoana izany.
Niisa 35 teo ny olona tonga.
Alahady 5 Jolay 2015
Alahady voalohany namin'y volana: Misy Fandraisana - Misy fandovana ny adidy
Niisa 42 ny mpiangona tamin'io.
Alahady famaranana ny taompianarana 2014-2015.
Volana Mey 2015
Alahady 31 Mey 2015: Fetin'ny Reny
Alahady farany amin'ny volana ity koa hanaovana ny fanomana-mpanahy ny hiatrika ny Fanasan'ny Tompo amin'ny Alahady ho avy izao.
Niisa 36 ny olona tonga tamin'io.
Alahady fetin'ny Reny ity koa manolotra ny arahaba hombaina firariantsoa ho an'ny Reny eto @ FPMA Orléans ary manolotra izany koa ho an'ny Reny rehetra.
Alahady 24 Mey 2015: Pentekosta 2015
Tetsy @ Eglise Ste Jeanne d'Arc no natao ny fotoam-pivavahana araky ny voalaza teo aloha.Nisy Batisa sy fanokanana Katekomena tamin'izany koa nahatratra 220 teo ny isan'ny olona tonga ka 202 ny lehibe ary 18 ny ankizy.
Seriny tokoa ny mpikarakara fa tsy maintsy nahondrana ny entana avy any @ Chapelle ka nampahatsiaro ny fomba sy fanao taloha izany. Efa ho roa taona mahery tokoa mantsy izay no nahazoana ny toerana ankehitriny.
Ny Mpitandrina Pascaline no nanao ny fanokanana ary Pst Landy Rajoharison no nanao ny Batisa.
Hira roa no nataon'ny AMF Amboara: Akaikinao Andriamanitra sy Izaho anie Jesoa.
Raha nandray ny fitenenana kosa ny Filoha Orélien dia nanolotra ny fisaorana ambava ny tsirairay sy ireo Tafo tonga nanatrika ny Fetimpiangonana [email protected] 16 Mey farany teo teto Orléans.
Alahady 31 Mey @ 10h30 toa ny mahazatra eto @ Chapelle St Marc hisy hakatoka ho fanomana-mpanahy amin'ny Fandraisana aorianan'ny fotoana.
Alahady 06 Jona @ 10h30 ao @ Chapelle St Marc: Alahady voalohany ka hisy ny Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo amin'io alahady io. Toy ny alahady voalohany rehetra ihany koa izay andro fandoavana ny adidin'ny Mpandray io andro io.
Alahady 17 Mey 2015:
Alahady fahatelo amin'ny volana ity alahady ity koa tsiahivina hatrany fa Alahady fampianarana no atao amin'ny toeran'ny toriteny.
Niisa 30 teo ny olona tonga tamin'ito fotoana ito.
Nasaina avokoa ny mpianakavin'ny Finoana tonga teo taorian'ny Culte mba hiaraka hisakafo etsy amin'ny Salle Madeleine izay nanaovana ny Fetimpiangonana ny Asabotsy.
Alahady voalohany amin'ny volana ka amapatsiahivina hatrany ny vahoakan'Andriamanitra fa Alahady fanatonana ny latabatra Masina izy io.
Ny fotoana manaraka
Alakamisy 14 Mey 2015: 10h30 Chapelle St Marc
Ny fotoana manaraka dia amin'ny Alakamisy 14 Mey, fankalazana ny andro niakaran'i Jesoa, ka hanomboka amin'ny 10h 30 toy ny mahazatra ihany ny fotoana. Hisy fandraisana @ io andro io.
Asabotsy 16 Mey 2015 : à12h Salle des Fêtes Madeleine Oreléans
Fetim-piangonana hanasana antsika rehetra araky ny flyer hitanareo teo ireny.
Alahady Pentekosta @10h :Eglise Ste Jeanne d'Arc(akaikin'ny prison taloha) jereo ny kalandary etsy ankavia fa io no manome ny plan sy ny adiresy.
Volana Aprily 2015
Nanomboka [email protected] ora voatondro ny fotoana androany ary niisa 38 ny vahoakan'Andriamanitra tonga tao.
Alahady 03 Mey 2015:Alahady Fandraisana, hisy ny valopy fanaterambokatra ary koa ny fotoana fandoavana ny adidin'ny Mpandray.
Zaikabe SVK FAfAts: Hatao amin'ny WE 1-2 Mey etsy Athis Mons. Hisy 4 ny avy eto Orléans.
Fivorian'ny Komity :Hatao ny Alahady 03 Mey izao aorian'ny Culte
Zaikabe SA Nasionaly : Hatao etsy Grenoble(Isère) ny WE 8-9-10 Mey ; hisy 10 ny avy aty
amintsika ny ho any.
Sakafombokatra FM Vierzon-Bourges: Hatao ny 10 Mey any Bourges
Fetimpiangonana FPMA Orléans: 16 Mey etsy @ Salle des Fêtes de la Madeleine.
Zaikabe SZM Nasionaly : ny 16 Mey etsy Athis Mons
Ny Fiangonana sy andro hivoriana manaraka:
Famerenana AMF: Zoma 01 Mey @ 14h-16h
Asabotsy 02 Mey Zoma 08 Mey sy Asabotsy 09 samy @ 16h-18h avy ireo.
Alahady 19 Aprily 2015: Alahadin'ny AMFO
Noventesin'ny AMF ny " Ho Anao Tomponay Mpanjaka mahery" tamin'ny arahaba Apostolika, alohan'ny toriteny moa dia nisy ny batisan'i Rabenja mianadahy kely izay arahabaina manokana etoana. Rehefa vita ny famelabelarana avy amin'ny Perikopa dia niroso ny toriteny ankira:
"Ry zanako mania-O ry velona- Iza no hiakatra-Ho kivy va- Omeo fo mino-Jesoa Mpanjakan'ny mpanjaka" Ireo hira enina ireo no noredonina tamin'io.
Nisy koa ny fivarotana sakafo taorian'ny fotoana hamenoana ny kitapombolan'ny Sampana.
Izany rehetra izany dia notontosaina tampitiavana avokoa ka isaorana ny Nahary nitahy ireo nandray anjara rehetra.
Alahady 26 Aprily 2015 @ 10h30 ato amin'ny Chapelle St Marc ihany. Tsy ho eo ny Mpitandrina fa hampanao hankatoka any Vierzon ka ny Loholona sy ny Filoha no hitarika ny fotoana.
Alahady 5 Aprily 2015 : Paska 2015
Nifety ny Paska tokoa ny teto @ Tafo FPMA Orléans tonga nankalaza ny fitsanganan'i Jesoa: Fandresena miezina ho antsika kristiana.
Niisa 114 ny vahoakan'Andriamanitra tonga tamin'izany: Lehibe 94 ary 20 ny ankizy.
Nisy ny fizarana vatomamy sy sôkôlà tao aorian'ny fotoampivavahana sy ny fandraisana ny Fanasan'ny Tompo.
Alahady 12 Aprily @ 15h ao @ Chapelle St Marc ihany: Alahady hanaovan'ny Sampana SA eto amin'ny Tafo ny Konsertrany.
Alahady 19 Aprily @ 10h30 ao @ Chapelle St Marc: Alahadin'ny Sampana AMF Orléans.
Torinteny ankira no hataon'izy ireo amin'izany.
Volana Marsa 2015
Alahady 29 Marsa 2015
Fanokafana ny faha 35 taonan'ny Tafo Orléans, ny famaranana moa dia ny 17 Oktobra 2015.
Tonga nitory ny tenin'Andriamanitra [email protected] izany ny Pst Jean Ravalitera Filoha Synodaly FPMA, nitarika ny fotoana kosa ny Mpitandrina Mpandrindra ny Tafo Pst Landy Rajoharison ary nifarimbona taminy ny Mpitandrina Mpandrindra ny Faritany FAfAts Pst Emma Randrianandrasana.
Novoasana teo izany ny teny faneva ao @ Efesiana 4:15"fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'Izay Loha, dia Kristy" izay azo mbangoina amin'ny hoe: Fitomboana amin'ny fahamarinana sy fitiavana.
Nanafàna ny fotoana ny Sampana Velona teto @ Tafo: SVK-SA-AMF narahan'ny SZM hatrany.
Niisa 102 ny olona tonga: 82 ny lehibe ary 20 ny ankizy.
Natao ny fizarana mofomamy fahatsiarovana tao aorian'ny fotoam-pivavahana.
Ny vaomieran'ny faha-35 taona no nikarakara ny fandeha rehetra.
Ity vaomiera ity izany dia misy ny solontena isaky ny sampana:
SVK: Noeline-AMF: Nériah-SZM: Mahefa; miaraka amin'ny Loholona:Bertrand ary ireo ao amin'ny Birao.
Alahady 22 Marsa 2015
Alahadin'ny Sampana Sekoly Alahady eto amin'ny tafo Orléans.
Natomboka [email protected] folo ora maraina ( 10h) ny fotoana fa mbola nisy ankatoka ho fandinihina ny toe-bola sy ny teti-bola 2014-2015 [email protected] io fotoana io.
Nisy roapolo mahery ny ankizy tonga ary 60 teo ny lehibe.
Nony nirava moa ny fotoana dia natao ny fiaraha-misakafo any amin'ny resto mahazatra rehefa toy izao.
Alahady 29 Marsa @ 10h30: Andro fanokafana ny fankalazana ny faha 35 taonan'ny FPMA Orléans.
Alakamisy 02 Aprily @ 19h: Alakamisy masina
Alahady 15 Marsa 2015
Alahadin'ny SVK Orléans ary Alahady fahatelo koa dia nisy ny fampianarana nataon'ny Mpitandrina Mpandrindra ny Tafo tamin'izany: Ny andininy rehetra tao @ perikopa no novoasana [email protected] izany.
Nahafinaritra ny fotoanan'ny SVK fa ny hira fiarahabana sy ny hira fiderana iray no nataondrizareo.
Na ny sakafo maraina alohan'ny culte na ny varotra laoka natao taorian'ny culte dia natolotra ampitiavana avokoa koa isaorana sy tehafana ny SVKO.
a)Ny fotoana manaraka dia:
Alahady 22 Marsa 2015 @ 10h: Alahadin'ny Sekoly Alahady eto amin'ny Tafo Orléans ary hitondran'ny Sampana antsika hiara-hisakafo etsy @ D'Hokkaïdo etsy Olivet aorian'ny Culte.
Mbola mahazo mividy ticket any @ Nissya sy Nina izay mbola nahazo takelaka.
Hanomboka @ 10h maraina ny fotoana fa tsy @ folo sy sasany toy ny mahazatra akory fa mbola hisy ankatoka handinihana ny toe-bola sy ny teti-bola amin'io andro io.
Alahady 29 Marsa 2015 @ 10h30: Andro entina hankalazana ny faha35 taonan'ny Tafo Orléans io andro io. Ny Pst RAVALITERA Jean, Pasitera Synodaly, no hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'io fotoana io.
b) Ny vaovao hafa:
-Nivory ny KP FAfAts omaly 14 Marsa ka ny nodinihana tany dia ny fanoamana izay entina any amin'ny Komity Maharitra(KM1) hatao ny 21 Marsa ho avy izao.
Ny ankoatra izay dia ny ZaikaBem-paritany hatao any Athis-Mons ny 25-26 Avrily 2015.
Alahady 01 Marsa 2015
Alahady voalohan'ny volana: Misy Fandraisana sy fandoavana ny adidy, ho an'ireo izay tsy manana karatra dia afaka mangataka izany any @ mpitambola
Nisy fivarotana mofo mamy ihany koa nataon'ny Sekoly Alahady mba ho famenoany ny kitapom-bolany.
Niisa 46 ny lehibe ary 8 ny ankizy tamin'io fotoana io.
Mbola mahazo misoratra anarana farany anio ny SA izay te handeha any @ Zaikabeny.
Efa misokatra ny vaomieran'ny faha35 taonan'ny Tafo koa manatona Loholona na Diakona raha te handray anjara amin'izany ianao.
Hisy fivorian'ny Birao (tsy ara-potoana) aorian'ny culte anio.
Alahady 15 Marsa- Alahadin'ny SVK Orléans: hisy petit-déjeuner ny maraina ary varotra laoka rehefa mirava.
Hatao ny Alahady 22 Marsa ny Alahadin'ny SA izay harahana fiaraha-misakafo any amin'ny Restaurant avy eo.
Amin'io andro io ihany no hatao ny fandinihana ny Toebola sy ny Tetibola eto amin'ny Tafo.
Alahady 29 Marsa Faha 35 taoanan'ny Tafo, hiaraka hankalaza an' Andriamanitra noho izany vanompotoana izany. Ny hitoriteny amin'io dia i Pst Ravalitera Jean Filoha Synodaly.
Volana Febroary 2015
Alahady 01 Febroary 2015
Alahady voalohan'ny volana ka nisy Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo.
Andro koa andoavana ny adidy eto amin'ny Tafo.
Niisa 70 ny tonga tao ka 12 ny ankizy madinika.
-Efa nitsangana ny Komitin'ny faha-35 taonan'ny Tafo koa manatona ny Loholona na ny Sekretera izay te handray anjara amin'ny fikarohana ny atao amin'izany.
-Nivory omaly 31 Janoary teto @ Chapelle St Marc ny Komity misahana ny Fiaraha-Mivavaka (FM) Vierzon Bourges izay misy olona 4 avy eto @ FPMAO ary 4 koa ny avy any @ FM Vierzon ary tarihan'yny Pst Mpandrindran'ny Tafo Orléans. Izy ireo izany no hamaritra sy handrafitra ny tatitra hatao isan-telovolana ho an'ny BF.
-Ny SVKO dia misaotra ireo nandahatena, fotoana sy aina [email protected] fahatongavana tany @ Temple Pentemonts omaly Asabotsy 31 Janoary : Famangiana ny Zokiolona eto @ Faritany.
-Ny SA kosa dia manomana ny diany handeha any @ ZKB Nasionaly izay hatao any @ la Salette any Grenobles ny WE ny 08-09-10 Mey 2015: hisy varotra mofo hataon'izy ireo ho famenoana ny kitapony.
-Ny AMF Paris dia manao fitsidiham-paritany ka ny eto @ FAfAts dia ny 14 Febroary @ 19h30 ao @ Pentemont ihany 106 rue de Grenelle Paris 7è.
-Alahady 08 Febroary 2015: Ny FM Vierzon Bourges dia hanao ny fanmpoampivavahana fanaony isaky ny Alahady faharo amin'ny volana ao @ Egl St J Baptiste 2 rue de tramaways de l'Indre, 18100 Vierzon.
Fotoana ampahafantarana ny FM eo @ ireo Fiangonana rahavavy manodidina io fotoana io ary hisy fiaraha-misakafo aorian'ny fotoana koa samia mivatsy ny anjarany avy.
-Alahady 15 Febroary 2015: Alahady fahatelo ka fandinihana soratra Masina no solon'ny Toriteny.
Arahaba sy ny rary mahasoa ho antsika rehetra nahatratra izao taona vaovao izao ny eto @ FpmaOrleans.fr.
Arahaba soasoava Tompokovavy ary soatsarà Tompokolahy isany.
Alahady 25 Janoary 2015
Fotoana hanomanampanahy ho amin'ny Fandraisana @ 01 Febroary ity alahady ity.
Isan'ny Mpiangona:44 ka 9 ny ankizy tamin'io.
Andro koa famaranana ny herinandrombavaka ho @ Firaisampinoana eto Orléans, ka ny teny amin'io dia ny Jaona 4:7 milaza ny hoe "Hoy Jesoa tamindravehivavy: omeo rano aho ho sotroiko". Etsy amin'ny Eglise Jeanne d'Arc no hifamotoana @ 17h no hifamotoana amin'izany.
-Ny an'ny FFKM kosa dia any Paris ao @ Paroisse Notre Dame des Champs 91 Bd Montparnasse Paris 6è.
-Ny Sampana SVK FAfAts kosa dia hanao ny fifampiarahabana ny Asbotsy 31 Janoary any Pentemonts rue de Grenelles Paris 7è.
-Ny antoko mphira Fiderana Paris dia hitsidika ny AMF Faritany ny 14 Febroary hoa vay izao ary hanao concert ny hariva @ 19h30 ao @ Temple Pentemont ihany.
-Nivory ny Komitim-piangonana omaly Asabotsy ary ny lehibe tapaka tao dia momban'ny fankalazana ny faha-35 taonan'ny Tafo izay hatao ny 29 Mars 2015 eto @ Chapelle St Marc ihany.
Alahady 18 Janoary 2015
Alahady natokana ho fampianarana ny SM eto amin'ny Tafo
Isan'ny Mpiangona: 45 ka 7 ny ankizy tamin'io isa io.
Alahady 04 Janoary 2015
Ity Alahady ity dia andro fiarahabana ny rehetra @ taombaovao 2015 eto @ Tafo Orléans ary indrindra hanolorana ny solombodiakoho ho an'ny Zokiolona eto @ Tafo.
Tao aorian'ny Fotoampivavahana dia niara-nizotra tany @ Restaurant tesy Olivet nanolotra ny fehim-panajana ireo zokiolona nisoratra teto amin'ny Tafo
Isan'ny Mpiangona: 84 teo ka 16 ny ankizy.
Tamin'ity andro ity ihany koa no nanoloran'ny SVK-O Galettes de Roi ho an'ny vahoakan'Andriamanitra.
Vaovao sy ny famotoana
Asabotsy 16 Janoary 2015: Alahady hiarahan'ny Faritany FAfAts manokana fotoampivavahana ho fiarahabana ny taona.
Alahady 17 Janoary 2015:Alahady fampianarana ny tenin'ny SM eto amin'ny Tafo
Asabotsy 24 Janoary 2015: Fivorian'ny Komitim-piangonana ara-potoana eto amin'ny Tafo.